Ny rindranasa dimy tsara indrindra momba ny kafe ho an'ny Android | Androidsis
Ny kafe dia iray amin'ireo zava-pisotro malaza indrindra eran'izao tontolo izao, ary raha tsy misy izany dia olona an-tapitrisany maro no tsy afaka miasa amin'ny andavanandrom-piainany. Ny lanjany dia nitombo ary isaky ny mahita karazana kafe sy fomba fanomanana azy ireo isika. Izany koa dia nahatonga izany isaky ny mandeha misy fampiharana bebe kokoa ho an'ny Android momba an'io fisotro io. Hiresaka momba azy ireo eto ambany isika.
Hatramin'ny nandaminana fifantina miaraka amin'ny ny fampiharana Android tsara indrindra momba ny kafe. Na fampiharana mampianatra antsika fomba hanomanana karazany samihafa izy ireo, na ireo izay manome fampahalalana momba izany. Ka azo antoka fa tena mahasoa anao izy ireo.
Ny isan'ny karazana fampiharana azo alaina ao amin'ny Play Store dia nitombo manokana. Ho fanampin'izay, eo amin'izy ireo no ahitantsika ireo safidy mahaliana indrindra. Ho an'ireo tia kafe dia safidy tsara hodinihina izy ireo.
2 Izany App Brew
3 Ahoana no fanomanana kafe tsara
4 Resaka kafe kafe
5 Resaka kafe mangatsiaka anglisy
Io no fampiharana feno indrindra momba ny kafe izay mety ho hitantsika ankehitriny. Ao aminy dia manana fizarana maromaro isika, izay samy manarona faritra samihafa. Manome fanazavana antsika izy io momba ny karazana kafe (cappuccino, latte, espresso ...) maro mba hahafantaranay ny fanomanana azy ireo, fa koa ny fampahalalana momba ny karazany tsirairay manokana, ny niandohany, ny niandohan'ny tsaramaso. Noho izany dia mianatra kely momba ny tantara sy ny maha-zava-dehibe ny tsirairay amin'ireo karazana ireo isika. Tena hanampy be koa izany ka afaka manomana azy ireo any an-trano isika, manondro ireo dingana sy habe amin'ny fotoana rehetra.
Ny fandefasana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android dia mitentina 0,76 euro. Saingy, ho takalon'ny fandoavana izany dia tsy misy doka na fividianana karazana ao anatiny.
Izany App Brew
Ity fampiharana faharoa amin'ny lisitra ity dia safidy tsara ho an'ireo mpampiasa manana milina ao an-trano. Izao no hataonao afaka manomana kafe vao nototoina karazana rehetra. Hatramin'io dia hitantsika ireo dingana rehetra izay tsy maintsy arahintsika mba hanomanana karazana kafe iray. Nanazava tsara azy ny zava-drehetra, miaraka amin'ireo dingana tsotra sy famantarana mazava be. Ho fanampin'izany, aseho ny fotoana, ny habetsany ary ny refy ilaina. Ka tsy hanana olana ianao raha ny fanarahana ireo fomba fahandro ireo. Azonao atao ny mamorona ny kafe misy anao amin'ny fomba matihanina ao an-trano. Ny interface interface dia tsotra ampiasaina.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Na dia mahita mividy sy dokam-barotra ao anatiny aza izahay. Soa ihany fa tsy doka manafika na manelingelina loatra izy ireo.
That Brew App - Mpanotrona kafe
Developer: Fampiharana Luup
Ahoana no fanomanana kafe tsara
Fahatelo mahita fampiharana hafa isika izay hanampy antsika hanomana kafe tsara izany. Ao anatin'izany no ahitantsika ny karazana kafe rehetra, ao anatin'izany ny malaza indrindra, mba hahafahantsika misafidy izay tiana hosotroina amin'izany fotoana izany. Eto ambany eto isika dia manana ny dingana rehetra ilaina hahafahana manomana an'io kafe manokana io. Ka hasehon'izy ireo amintsika ny torolàlana, ny akora ary ny fatra ilaina. Nohazavaina tamin'ny fomba tsotra sy tsikelikely ny zava-drehetra. Ka dia tsotra be ho antsika ny manao azy.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Na dia mahita doka ao anatiny aza izahay. Doka izy ireo indraindray mety hahasosotra, saingy tsy maninona ny fampiharana.
Ahoana no fomba fikarakarana kafe tsara
Resaka kafe kafe
Ny kofehin'ny rojo malaza no be mpitia indrindra, ary koa misy karazany maro be azo ampiasaina. Miaraka amin'ity rindrambaiko ity ho azonao atao ny manomana ny kinanao manokana amin'ireto zava-pisotro ireto any an-trano. Koa satria ao anatiny dia manana ny fomba fahandro rehetra momba ireo kafe ireo isika, koa ho mora ho antsika ny manomana azy ireo isaky ny maniry izany isika. Ao anatin'io dia mila misafidy aloha ny karazana manokana tiana omanina isika ary ao anatiny dia misy ireo akora, dingana ary habetsahana ilaina hanomanana ny zava-drehetra. Miaraka amin'ny interface mora ampiasaina, dia tsy hanome antsika olana amin'ny fampiasana izany.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Na dia mahita doka ao anatiny aza isika, izay mety hahasosotra indraindray.
Resaka kafe mangatsiaka anglisy
Ankehitriny rehefa ho avy ny fahavaratra, dia tena te-hisotro kafe mangatsiaka tsara ianao. Noho ity fampiharana ity dia ho vitantsika amin'ny fomba tsotra. Manana karazany maro izy, nanazava amin'ny antsipiriany sy sary avokoa izy rehetra. Noho izany dia hitantsika ireo akora ilaina, ny dingana tsy maintsy hataontsika sy ny vola tokony hampiasaintsika amin'ireo akora tsirairay. Ny zava-drehetra hahafahantsika manomana an'io kafe mangatsiaka io amin'ny fahavaratra. Ny interface dia tena tsotra. Na dia amin'ny teny anglisy daholo aza ny recette.
Maimaimpoana ny fampidinana an'ity rindranasa ity ho an'ny Android. Na dia toy ny tamin'ny tranga teo aloha aza dia manana dokambarotra ao anatiny izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny fampiharana kafe tsara indrindra ho an'ny Android